राजपुर फरदहवा बमकाण्डका साक्षीलाई प्रहरीको सुरक्षा - NepalKhoj
नेपालखोज २०७६ मंसिर ६ गते १०:०४
६ मंसिर, रौतहट । राजपुर फरदहवा बमकाण्डका जाहेरीकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी र पीडितका लागि रौतहट प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । जिल्ला अदालतले साक्षीको सुरक्षामा ध्यान दिन आदेश दिएपछि प्रहरीले सतर्कता अपनाएको हो ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११४ (२) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७५ को नियम ६१ बमोजिम पीडित, जाहेरीकर्ता, साक्षीको उचित व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो । कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दाबारे अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका बेला विस्फोटका घाइते भारतीय नागरिक गौरीशंकर रामलाई अपहरण गरेर बयान फेर्न लगाइएको घटना बाहिर आएको थियो ।
यस्तै मृतक ओसी अख्तरकी श्रीमतीलाई आर्थिक प्रलोभन तथा मानसिक तनाव दिई श्रीमान् जिउँदै छ भनेर अदालतमा जाहेरी दिन लगाइएको थियो । घटनाका घाइते रामको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले राजपुर घटनाका सरोकारवाला अधिकांशको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘२० जना जति साक्षी, घाइते, मृतक परिवार र प्रत्यक्षदर्शीको सुरक्षाका लागि निगरानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘साक्षीको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं ।’
यस्तै, विस्फोटमा ज्यान गुमाएका ओसी अख्तरको परिवारका लागि समेत सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । ओसीकी आमा रुक्साना खातुनले आलमविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको ०६७ माघ १० गते माइतीबाट घर आउँदै गर्दा गौंडा कुरेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
राजपुर बमकाण्डका प्रतिवादी भनिएका फरार १० जनाको खोजी तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा आलम मात्र पक्राउ परेका छन् । उनका भाइ महताब आलमलगायत भने फरार छन् । ‘हामीले फरारको खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरिसकेका छौं,’ एसपी खत्रीले भने । आलम पछिल्लोपटक पक्राउ परेपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा ६ जना प्रतिवादी थपिएका हुन्  ।
प्लस टु पास भए रेल चालक !
बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्‍वान
पशुपतिमा रुवाबास ! (फोटो फिचर)
संसद्‌को विशेष अधिवेशन आजै राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न सरकारको सिफारिस